Oke arụmọrụ anyanwụ nchekwa EV ike mgbidi 3.2v 50ah rechargeable prismatic lifepo4 cell batrị
Anyị na-enye arụmọrụ dị elu nke nchekwa anyanwụ dị oke ikuku Igwe ikuku 3.2v 50ah rechargeable prismatic lifepo4 cell cell. Mpempe ahaziri iche, ngwa ahịa ụlọ ahịa, batrị ika, bọọdụ nchebe na-ahụ maka nyocha na mmepe, ahụmịhe ọrụ, tozuru oke ma mepụta usoro mmepụta.We na-enye ndị ahịa nọ ebe dị elu batrị LFPO4-1 dị elu ma na-enyere ndị ahịa aka ịnyefe batrị na China n'aka ha. site n'oké osimiri na ikuku site na ọnụ ahịa dị mma. Anyị na-ewetara gị nkwado nkwado ọrụ na akwụkwọ ikike maka gị!
PLM 3.2v 280Ah Prismatic LiFePO4 LFP Lithium Cell Cell maka EV, Mbara igwe nchekwa nchekwa sistemụ ume ọkụ.
Anyị na-enye ezigbo batrị 3.2v 280Ah Prismatic LiFePO4 LFP Lithium Cell maka EV, Solar sistemụ ume ọkụ usoro. bụ onye nrụpụta ọkachamara na-enye nyocha, mmepe, mmepụta, na ọrụ ire ere nke ụlọ batrị lithium ion, yana ngwugwu batrị. Anyị na-chepụta ma rụpụta batrị emebere emebere emebere emebere emebere emebere iji mepụta. Ngwunye batrị lithium lifepo4 ahaziri nke 3.2V-96V, 5AH-280AH, nke enwere ike iji ya na RV, EV, Solar system, E-bike, UPS, usoro nchekwa ike, ebe nkwukọrịta telefon, E-skooter, E-tool, golf. ụgbọ ala, ndụdụ, ụgbọala nhicha, oche nkwagharị eletrik, na ngwa okirikiri ndị ọzọ.
Anyị na-enye ezigbo batrị Lithium Ion Lifepo4 100ah batrị 3.2v Lifepo4 Batrị Mkpụrụ ndụ Mbara Igwe Ntanetị batrị batrị ụlọ na-enye ike. Dabere na sel batrị LFP dị iche iche, nwere ike ịkwadebe kposara, asher na plates .Mgbe anyị bụ ụlọ ọrụ batrị, anyị na-enye nhazi OEM / ODM, na-abụghị ike, nha, nwekwara ike ịkwadebe akụkụ niile ịchọrọ maka ọrụ gị. ịkpọtụrụ anyị mgbe ịchọrọ batrị.